समाचार - ३ लिपस्टिक जुन गर्मी को लागी सुपर उपयुक्त छ, सौन्दर्य रोइरहेको छ!
शरद winterतु र जाडो को "भारी" भावना बाट फरक, गर्मी लगभग "ताजा" बन्द गर्न को लागी हो, र मेकअप पनि हल्कापन र पारदर्शिता को एक प्रवृत्ति हो।
तर जे होस् मेकअप कति पारदर्शी छ, लिपस्टिक लगाउनु अझै पनी धेरै मानिसहरुको लागी एक अपरिहार्य कदम हो।
गर्मी मा, मानिसहरु धनी रंगहरु को लागी केहि "उज्यालो र जीवन्त" रंग मनपर्छ।
तेसैले आज म तपाइँलाई एमवे गर्मी को लागी उपयुक्त केहि सय युआन लिपस्टिक दिनेछु।
बिभिन्न छाला टोन संग वास्तविक मानिसहरु पनि सँगै व्यवस्था गरीरहेछन्, अब ~ म तपाइँ सबै एक खुसी रोपण hhhhhhhh कामना गर्दछु
ग्रीष्म लिपस्टिक को लागी यी छनौट गर्नुहोस्
दर्पण पानी चमक ओठ चमक
अंजीर रंग पछिल्लो दुई वर्ष मा एक धेरै लोकप्रिय रंग हो, रंग चमक विशेष गरी उच्च छैन, प्रतिदीप्ति को कुनै अर्थ छैन, यो गर्मी को लागी धेरै उपयुक्त छ!
यो सस्तो अंजीर रंग को एक खजाना हो। सादा मेकअप र प्रकाश मेकअप संग एक पतली कोट तपाइँको रंग सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। बाक्लो कोट को रातो टोन स्पष्ट हुनेछ। म के भन्छु कि यो एक सुन्दर र सुन्दर भावना छ।
यद्यपि यो दर्पण पानी चमक होंठ चमक भनिन्छ, वास्तव मा दर्पण भावना विशेष गरी उच्च छैन, यो एक फिल्म गठन हुनेछ। मॉइस्चराइजिंग डिग्री अझै राम्रो छ, र त्यहाँ सूखी लाइनहरु र पीलिंग को रूप मा साना समस्याहरु को अनुहार मा कुनै असमान आवेदन हुनेछ।
बस्ने शक्ति धेरै राम्रो छ। सामान्यतया, यो कपमा टाँसिएको बिना गर्न सकिन्छ, तर एक साधारण समस्या उठ्छ, जुन ओठ दाग छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा यो धेरै पटक परीक्षण गरें। यो सत्य हो, यो अनलोड गर्न सजिलो छैन। यस बारे मा ख्याल गर्ने दाताहरु जडी बूटी रोपण मा सावधान हुनु पर्छ!
Baipi को अनुहार मा, यो एक धेरै बौद्धिक र सुरुचिपूर्ण छ। छोटो मा, तपाइँ तपाइँको आँखा बन्द संग गलत गर्न सक्नुहुन्न।
पहेंलो अनुहार मा, यद्यपि सेतो अनुहार को रूप मा उठाईएको छैन, यो कम कुञ्जी र ग्लैमरस भावना पनि धेरै प्रभावशाली छ!
नायिका सुस्त धुंधला ओठ र गाला दोहोरो प्रयोग होंठ चमक
यो होंठ चमक अब धेरै लोकप्रिय छ, मूल्य उच्च छैन, र p प्यालेट सुन्दर छ, र हरेक पटक एक नयाँ रंग जारी छ, म स्वेच्छाले यसको लागी तिर्न सक्छु।
रातो बेर बीम केहि समय पहिले जारी एक नयाँ रंग हो। यो भित्र एक सानो गुलाब टोन संग एक धेरै उज्यालो सेम पेस्ट रंग हो। यो पातलो लेपित छ जब यो अधिक स्पष्ट हुनेछ, र खैरो टोन भारी हुनेछ जब यो मोटो लेपित छ। मुखमा एक प्रकारको हुनेछ। कुहिरो लागेको अनुभूति।
अघिल्लो ओठ चमक जस्तै, होंठ चमक को बनावट धेरै राम्रो छ। जब तपाइँ यसलाई मुखमा राख्नुहुन्छ, त्यहाँ एक चीख्दो भावना हुनेछ, र ओठ लाइनहरु एक सेकेन्ड मा सीधा नरम केन्द्रित हुनेछ।
रहने शक्ति खराब छैन, यो कप एक सानो दाग, जो स्वीकार्य दायरा भित्र छ।
यो रंग बिल्कुल पिक छैन, यद्यपि यसमा केहि गुलाब नोट छ, यो अझै पहेलो छाला को लागी धेरै मैत्रीपूर्ण छ। र रंग लुकाउने शक्ति पनि धेरै राम्रो छ, होंठ को रंग को रंग आफै मा धेरै असर गर्दैन।
हल्का पानी चम्किलो ओठ ग्लेज
हामीले यो प्रसिद्ध भित्री नाटक श्रृंखला ओठ ग्लेज धेरै पटक पहिले सिफारिश गरेका छौं, जस्तै: गैर-बोसो मुस्कान, तीन बिन्दु सुस्त, मानक जम्पि other र अन्य रंग संख्या, र अब म प्राय यो मेरो मेकअप झोला मा लगाउँछु।
सत्य भन्न को लागी, यस श्रृंखला को रंग संख्या नाम मा धेरै राम्रो छ! यो #PinkSleepwalk दिनको निद्राको लागी नयाँ रंग हो। मलाई पहिलो नजर मा मन पर्यो। खुबानी चिया गुलाबी रंग आक्रामक छैन, एक धेरै पारदर्शी चमक संग युग्मित, यो गर्मी को स्वाद छ!
मँ यो एक को लागी मोटो कोटिंग वा परत कोटिंग को सिफारिश गर्दछु, किनकि यदि यो पातलो लेपित छ, मुख को पानी देखी को अतिरिक्त, रंग एक्लो हुन सक्छ।
बनावट ओठ चमक जस्तै एक बिट हो, तर यो कि चिपचिपा छैन। यो लागू गरे पछि, एक नरम फिल्म एक धेरै समय पछि गठन गरिनेछ, एक सुन्दर दर्पण जस्तै भावना संग।
तर मलाई लाग्छ कि यो प्रयोग को बिन्दु पुन: आवेदन गर्न को लागी हो, किनकि स्थायी शक्ति धेरै सामान्य छ, यो सार्न को लागी सजिलो छ, र यो सानो मात्रा मा र धेरै पटक superimposed गर्न सकिन्छ, र बाक्लो कोट ओठ सुस्त महसुस गर्दैन।
यो एक छाला टोन छान्दैन, तर यो सजिलै ओठ को रंग को रंग बाट प्रभावित हुन्छ।
यदि तपाइँको ओठ को रंग आफै मा अपेक्षाकृत गाढा छ, यो यसको साथ एक पारदर्शी होंठ चमक हुन सक्छ, बस केहि म्याट लिपस्टिक लेयर गर्न को लागी यो प्रयोग गर्नुहोस्, जो एक राम्रो विकल्प हो।
पोस्ट समय: जून-22-2021
© प्रतिलिपि अधिकार - २०१०-२०११: सर्वाधिकार सुरक्षित। तातो उत्पादनहरु - साइटम्याप
eyeliner, लिपग्लास, मिंक पलक, आँखा कालो, बरौनी विक्रेताहरु, बरौनी विस्तार,